Banaabaxweyn oo looga soo horjeedo Farmaajo oo ka socda magaalada Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Banaabaxweyn oo looga soo horjeedo Farmaajo oo ka socda magaalada Muqdisho
Banaabaxweyn oo looga soo horjeedo Farmaajo oo ka socda magaalada Muqdisho
Waxaa goordhaw Taalada Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho banaan bax cabasho ah ka dhigay Waalidiin sheegay in caruurtooda iyaga oon raali ka aheyn dowlada si qarsoodi ah ugu qaaday dalka Eritrea.
Waalidiinta banaan baxa dhigayay ayaa sheegay in caruurtooda si qarsoodi ah loogu qaaday dalka Eritrea si loo askareeyo, waxa ayna xuseen in mudo ah in aysan war iyo wacaal aysan ka aheyn caruurtooda la geeyay dalka Eritrea.
Waxa ay sheegeen Waalidiintan banaan baxa dhigayay in taliyaha Hay’ada Nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin caruurtooda geeyay dalka Eritra, waxa ayna codsadeen in ay helaan caruurtooda nolol iyo geeri.
Waalidiintan isku soo baxay oo wajiyadooda laga dheehanayay dareen murugo xumbaarsan ayaa ka codsaday Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo iyo Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Xil gaarsiinta in caruurtooda loo soo celiyo .
Dowlada Soomaaliya ayaa ayaa la sheegay in dalka Eritrea geesay dhalinyaro badan si askar looga dhigo, waxaana horey u soo baxayay warar sheegayay in dhalinyaradaasi qaarkood lagu laayay dalka Itoobiya halka kuwa kalana lagu dilay gudaha Eritrea.
Previous articleMaamulka Somaliland oo deegaanada Maamulkeeda ka bilowday howlgal lagu buufinayo Ayaxa oo dhibaato ba’an ku haaya dadka xoola dhaqatada ah
Next articleIska hor imaad ka dhacay saakay xaafada Madaari Duleedka islii iyo Ciidamada Kenya oo dagaal kala hor tagay.
Dagaal toos ah oo u dhaxeeya Falastiin iyo Israa’iil oo ka...
Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Somaliland oo sheegay in khilaaf dambe uusan...
Al-shabaab oo saakay la wareergay degmada Raaga-ceelle ee gobalka Shabeelada dhexe...